တနိုင်း, တနိုင်းရေကန် - Bahir Dar
အာဖရိကတိုက် အီသီယိုးပီး Bahir Dar
ဧရိယာ: 2156 စတုရန်း။ ကီလိုမီတာ
အမြင့်: 1,830 မီတာ
အရှည်: 84 ကီလိုမီတာ
width: 66 ကီလိုမီတာ
အများဆုံးအတိမ်အနက်: 15 မီတာ
စီးသောမြစ်: အသေးစား Abbay
အီသီယိုးပီး - အလွန်ရောင်စုံတိုင်းပြည်နှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ပြည့်စုံသည်ခပ်သိမ်းသောအရပ်၌။ သဘာဝအများနှင့်သမိုင်းရှုထောင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကတိပေးထားရာရေကန်တနိုင်း, သွားရောက်လည်ပတ်ရန်, အာဖရိက၏မျက်နှာတကိုဖြတ်ပြီးခရီးသွားလာ။
တနိုင်း - တိုင်းပြည်တွင်အကြီးဆုံးရေအိုင်။ ဒါဟာအီသီယိုးပီး၏မြောက်ဘက်၏အနောက်မြောက်ပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတွင်တည်ရှိသည် Bahir Dar ၏မြို့ ။ အောက်ပါကိန်းဂဏန်းများအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရေဒီထူးခြားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်:
အမြင့် - ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် 1830 မီတာ;
အတိမ်အနက် - 15 မီတာ (မိုးရာသီအတွက်) ၏အများဆုံး;
အရွယ်အစား - 84h66 ကီလိုမီတာ။
Tan ကတောင်များ (အဲသယောပိသို့မဟုတ် Lunar ကိုခေါ်) ကဝိုင်းရံ, သောအမြင့်3မှ4တထောင်နေကြပါတယ်။ အမ်အိုင်ထဲသို့ 50 မြစ်များစီးဆင်း။ အခြေခံအားဖြင့်သူတို့က, အကြီးဆုံးသေးငယ်တဲ့ Abbay (တစ်ခါတစ်ရံအထက်အပြာရောင်နိုင်းလ်ခေါ်) သေးငယ်တဲ့စဉ်းစားသည်နေကြသည်။ ဒါဟာရေကန်တနိုင်းမြစ်ထဲကစီးဆင်း အပြာရောင်နိုင်းလ် သည်ဝှိုက်နိုင်းမြစ်မှဆူဒန်အတွက်ပြီးသားရောနှောပေါင်းစပ်သွားလေသည်သောတိုက်ကြီး၏အဓိကရေလမ်းဖြစ်ပေါ်လာသော။
အီသီယိုးပီးထဲမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားရေကန်အတော်လေးလူကြိုက်များခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရေးခရီးသွားများအတွက်အပေါ် reshivshiesya အာဖရိကမှာအားလပ်ရက် , နိုင်ရန်အတွက်ကဒီမှာလာ:
အံ့မခန်း 42 မီတာကိုတွေ့မြင် ရေတံခွန်တစ်ထောင်-Ysat , အိုင်ထဲကနေအသက် 30 ကီလိုမီတာနှင့်၎င်း၏လှပမှုနှင့်အာဏာနှင့်အတူဆွဲဆောင်ရာ;
အဆိုပါအပြာရောင်နိုင်းလ်အရမ်းလေးစားမိပါတယ် - ဒဏ္ဍာရီများနှင့်အလွန်လှပသော မြစ် ;
ယင်းဘော်ရီဂျင်နီအသက်ရှင်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, သူတို့ "စက္ကူ" သို့မဟုတ်ကျူစက္ကူလှေလုပ်အပေါ်တစ်ဦးစီးနင်း;
ရှေးဟောင်းခရစ်ယာန်၏ဂုဏ်အသရေတန်ဖိုးထား အသင်းတော်များနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းများ နေဆဲလည်ပတ်ကြသည်ကို၎င်း,
အိုင်၏ avifauna ၏အဓိကကိုယ်စားလှယ်များ - ဒေသခံဝံပိုငှက်နှင့်အတူဓာတ်ပုံရိုက်။
ရေကန်မျက်နှာပြင်ကနှစ်ဒါဇင်ကျွန်းများကျော်ပြန့်နှံ့နေပါတယ်။ ထူထပ်ရှုတ်ထွေးစိမ်းလန်းသောနှင့်လူနေထိုင်မှုမရှိ (အိုင်၏ဘဏ်များအပေါ်တည်ရှိပါတယ်အဲသယောပိရွာ) ဖြစ်ပါသည်အရှိဆုံးသောပွညျသူပွညျသားကြီးမားခြင်းနှင့်အသေးစားကွက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါခရီးသွားဧည့်များ၏တောင်းဆိုချက်အရမှာဒေသခံလမ်းပြအရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ကျွန်းများသို့ချဉ်းကပ်နေကြသည်။
နီးပါးတိုင်းသူတို့ထဲကတဦးတည်း ပို. ပင်တစ်ဦးသြသဒေါက်ဘုရားကျောင်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အားဖြင့်မှတ်သားခြင်း, ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာအဆောက်အဦးများပျက်စီး, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာလည်းပွနျလညျထူထောငျကွသညျ။ ဤရွေ့ကားအသင်းတော်များ XIII ကတည်းကအလယ်ခေတ်က built-in ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းဒီမှာမွတ်စလင်ကျူးကျော်ထံမှအထီးထီးနေခြင်းနှင့်ခိုလှုံရာရှာသောဘုန်းကြီးများလှည့်လည်နေထိုင်ခဲ့တယ်။ ရေကန်တနိုင်းနှင့်၎င်း၏ကျွန်းများဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အကောင်းဆုံးသင့်လျော်သည်။ ယနေ့သြသဒေါက်အသင်းတော်များနှင့်အသင်းတော်များသမ္မာကျမ်းစာမှမြင်ကွင်းများနှင့်ဘာသာရေးအရောင်များ၏ကြင်နာ၏ပုံစံအတွက်တစ်ဦးပါရမီခြယ်သမြို့ရိုး, (သူတို့ပတ်လည်၌-ပုံဖြစ်ကြပြီးကျူများနှင့်ဖုံးလွှမ်း) က၎င်း၏ပုံမှန်မဟုတ်သောဗိသုကာနှင့်အတူခရီးသွားဧည့်များ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်, အဲသယောပိခရစ်ယာန်ဘာသာအကျွမ်းတဝင်အနေဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသိသိသာသာကွဲပြားနေသည်။
ရေကန်တနိုင်း၏လူကြိုက်အများဆုံးအသင်းတော်များ - ဖြစ်ပါသည်:
Kebran ဂါဗြေလ (XIII ရာစု);
Ura Kidane Meheret (XVI);
Gran Selassie (XVIII) ။
အဆိုပါဒေသခံများခရီးသွားဧည့်ရန်အလွန်ဖော်ရွေဖြစ်ကြသည်။ သေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေအဘို့သူတို့သင်တစ်ဦးလမ်းပြခွဲဝေချထားပေးရန်မည်က "စက္ကူ" သို့မဟုတ်မော်တော်ဘုတ်များတွင်ရေကူးဖို့ဖြစ်နိုင်သောကျွန်းများအပါအဝင်အိမ်နီးချင်းရှိသမျှတို့သည်အလှအပ, ပြသပါလိမ့်မယ်။
က - အိုင်တနိုင်းမြို့သို့အနီးဆုံး Bahir Dar ။ ဒါဟာ Gorgory ကနေကူးတို့ဖွငျ့ရောက်ရှိနေပြီသို့မဟုတ်ထဲကနေမောင်းထုတ်နိုင်ပါတယ် Addis Ababa ကား, ဘတ်စ်ကားသို့မဟုတ်အချင်းချင်းဘတ်စ်ကားရန်။ ခရီးသွားအချိန်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ရွေးကောက်တော်မူသော mode ကိုပေါ် မူတည်. 8-11 နာရီဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လေယာဉ်ပျံကုမ္ပဏီအဲသယောပိလေကြောင်းလိုင်းအားဖြင့် Bahir Dar အတွက် (ဤနေရာတွင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်လေဆိပ်ရှိပါတယ်) ။
Agadir - Beach
Casablanca - ကမ်းခြေ
Gallstone ရောဂါ - ရိုးရာနည်းလမ်းကုသမှု
မုတ်ဆိတ်မွေး Iris က - ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှုနှင့်စောင့်ရှောက်မှု၏အခြေခံ
အိမ်သူအိမ်သားထဲမှာခဲပိတ်ပင်ခဲ့ကြသူ 20 ဘိုးဘေးတို့သညျ "သူကပြောတယ်ခွေး!"
White က Crow - အရာရာကိုကြိုက်ဖို့လွယ်ကူမဖြစ်ပါသလား
မိုင်နိုအက်စစ် - အကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်ပျက်ဆီး